200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Qormo xiisa badanSidee loo badbaadin karaa jiritaanka dalka Soomaaliya iyo dadkiisa ? | UfeynNews.com
Qormo xiisa badanSidee loo badbaadin karaa jiritaanka dalka Soomaaliya iyo dadkiisa ?
Dalkeena Soomaaliya, ayaa maanta marayo marxalado qatar badan, Kuwaasi oo u baahan in wax laga qabto intaanu dalku gabi ahaanba baabi’in amaba uu gacanta u galin cadowgii soo jireenka ahaa. Waxaa sidaasi oo kale iyagana qataro badan wajahayo dadkii Soomaaliyeed haddii ay ahaan lahaayeen kuwii u qaxay qurbaha iyo haddii ay ahaan lahaayeen kuwii ku haray gudaha dalka.
Sidaan soo xusuyba, Waxaa xaalad halis ah ku jira dalka Soomaaaliya ka dib markii uu gacan-galay dad Soomaali oo aan wadaniyiin ahayn, Kuwaasi oo dalkii u kala jarjaray gobolo yar yar oo ay ka jiraan maamul beeleedyo ay wax ka dhiseen cadowgii soo jireenka ahaa, halka ay dhinaca kalena socdaan dagaallo oo ay ku dhimanayaa dad badan oo Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan.
Dalkan Soomaaliya, ayaa wajahayo shirqoollo aan horay loo arag noocooda oo kale, Kuwaasi oo ay ka danbeeyaan cadowgii soo jireenka ahaa ee burburiyey Qarankeenii xoogga badnaa. Tusaale ahaan, Waxa uu cadowgu doonayaa in dalka laga hirgeliyo nidaam Federaal ah oo ku salaysan hab qabiil sida hadaba socoto, Si aan markaasi loo helin Qaran Soomaaliyeed oo mid ah, Islamarkaana xoog badan, halka uu dhinaca kalena Cadowgu dhiirigelinayo qadiyadda gooni-isutaagga ee uu ku hadaaqayo Maamulka Soomaaliland.
Waxa uu sidoo kale cadowgu ka shaqeynayaa in ay sii socdaan dagaalada sokeeye ee hadda socda, Isagoo markaasi kaashanayo dalal shisheeye oo aan dan iyo muraad ka lahayn dadka Soomaalida ah, si aan markaasi loo helin dal Soomaaliyeed oo nabad ah. Waxaa uu sidoo kale Cadowgu doonaya in uu la wareego masiirka dalka, Isagoo isticmaalayo magaca uuruka IGAD ee khabiith ah sida hadaba socoto.
Dalka Soomaaliya, ayaa ku socdo wadadii uu ku baabi’i lahaa amaba lagu qabsan lahaa haddan maanta la badbaadinin. Tusaale ahaan, Waxaa taladii iyo masiirkii Umadda loo dhiibay ninkii ay awoowayaashiisu qeybiyeen dalkeena iyo dadkiisa, Kaasi oo maanta aad mooddo in uu isaguna ku socdo wadadii ay mareen awoowyaashiisii hore. Yey ahaayeen kuwii Soomaali kala qeyb-qeybiyey islamarkaana bixiyey dhulkii la oran jiray NFD iyo SOOMAALI GALBEED ?
Dhawaan waxaa hadlay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka, Kuwaasi oo sheegay in uu dalku ku dhacay gacan gumeysi, iyagoona tusaale u soo qaatay waxyaabaha uu maanta samaynayo ninka lagu magacaabo Generaal Garbe iyo gacan-yarihiisa Soomaaliga ee Maxamed Cabdi Afey. Labadan Cadow, ayaa ku howlan dhismaha maamul beeleedyo Iyaga hoosyimaada, Taasna waxaa daliil u ah habdhaqanka maamuladii ay wax ka dhiseen sida Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo kale.
Xildhibaanadan ayaa ku dooday, Iyagoo waliba dhaaranayo in aysan Soomaaliya ka jirin wax dowlad ah, halka ay dhinaca kalena tilmaameen heerka ay gaarsiisan tahay faragelinta Shisheeyaha, gaar ahaan tan ka imaanaysa cadowga, Iyagoona tusaale u soo qaatay dhacdadii fooshaxumayd ee uu cadowgu kula dhaqaaqay gudoomiyihii sharciga ahaa ee gobolka Gedo, Kaasi oo la isugu daray badal iyo musaafurin aan horay loo arag nooceeda oo kale xilli ay arintaasi ka aamuseen raggii sheeganayey in ay dowlad yihiin.
Haddii ay sii socdaan waxyaabaha maanta socda, Waxaan shaki iiga jirin in ay Soomaaliya mari doonto wadadii ay mareen dalalka Yuguslaafiya iyo Sudan oo kale. Kuwaasi oo midnimadoodii ay kaladhantaalatay ka dib markii la farageliyey. Waxaan sidoo kale iyana shaki iiga jirin in ay Soomaalidu la mid noqon doonto sida Falastiiniyiinta oo kale, Kuwaasi oo noqday qurbo-joog ku kala daadsan dunida dacaladeeda ka dib markii la qabsaday dhulkoodii, Islamarkaana la waayey qaran mideeya.
Kaasi waxa uu ahaa muuqaalka guud ee Wadanka bal ka waran muuqaalka dadka ? Runtii markaad fiiriso xaaladda ay ku sugan yihiin dadka Soomaalida ah meel kastaaba ha ku noolaadeene, Waxaa runtii kuu soo baxaysa inayan wax badan ka fiicneyn xaalka uu ku sugan yahay dalkooda. Tusaale ahaan, waxaa jira isbadalo halistooda leh, oo ku socda Soomaalidii qurbaha ku nooleyd, halkaasi oo maalin walba aad maqlayso kuwa gaaloobay, kuwa shiicoobay iyo waliba kuwa kale oo dhaqankoodii ka tagay.
Waxaa sidoo kale iyana jira halisyo ku wajahan dhaqanka iyo luuqadda Soomaaliga oo runtii laf-dhabar u ah jiritaanka qofka Soomaaliga ah. Imisa ilmo Soomaaliyeed ayaa maanta koroyo, Iyaga oo aanan ku hadlin af soomaali ? Imisa dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa maanta ku barbaarayo mujtamicaad aan diin ahaan iyo dhaqan ahaanba la mid ahayn dadka Soomaalida ? Aan isweydiinee maxay la soo noqon doonaan kumanaankaan kun ee hadda ku nool qurbaha ?
Aan isweydiinee mar kale, muxuu xaalku noqon doonaa marka uu faraha ka baxo hirarkan tahriibka ee galaafanayo nolosha dhalinyaradeenii qiimaha badneyd, amaba uu sii socdo dagaalkan sokeeye ? Maxaase dhacayo haddii la waayo qaran Soomaaliyeed oo mideeya guud ahaan dadka Soomaalida ah, gaar ahaan Soomaalida ku nool dhulka Jamhuuriyadda ? Soomaaliduse war ma u haysaa isbadalada ka socda Caalamka sida dagaalada ka socda Bariga Dhexe oo kale + islaam-nacaybkan ku faafayo dalalka reer Galbeedka ah.
Markan hadalka soo uruuriyo, Dalkan iyo dadkiisu waxa ay ku socdaan waddo mugdiga oo keeni karta in la waayo dal Soomaaliyeed oo mid ah, waana sida ay maanta ka shaqeynayaan dalalka Itoobiya iyo Kenya oo runtii ah cadowga rasmiga ee ay leeyihiin dadka Soomaalida ah. Waan ku celinayaa mar kale Soomaaliya waxa ay halis ugu jirtaa in ay baaba’do amaba ay u kala gogo’do dalal yar yar oo ay kor ka maamulaan Itoobiya iyo Kenya hadaanan la helin dad wadaniyiin ah oo arinkaasi ka hortago.
Gaba gabadii iyo gunaanudkii, Waxaan soo jeedinayaa talooyin dhowr ah oo aan isleeyahay waxa ay badbaadin karaan dalkan iyo dadkiisa. Waxaana talooyinkaasi ka mid ah kuwa soo socda:-
1- In la dhiso gole badbaado qaran ah, Kaasi oo ka shaqeeya sidii la isugu keeni lahaa dhinacyadan Soomaalida ah ee iska soo horjeeda.
2-In golahaasi lagu daro dadka ay ka midka yihiin Cabdiqasim Salaad Xasan, Prof.Cabdisaciid Samatar, Sh. Cabdirashiid Cali Suufi, Sh. Maxamed Idiriis, Sh. Mustafa Xaaji Ismaaciil iyo ragga la midka ah.
3-In la helo warbaahin wadani ah oo ka shaqeysa arimaha joojinta dagaalada, nabadeynta iyo waliba dib-u-heshiisiinta.
4-In laga horyimaado damaca waalan ee cadowga, islamarkaana aan la dhageysan balanqaadyada beenta ee ay samaynayaan kuwa u shaqeeya cadowga.